မန္တလေးမြို့တွင် သိန်းငှက်စစ်ဆင်ရေး စီမံချက်ဖြင့် လုံခြုံရေး အင်အား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေ - Yangon Media Group
မန္တလေး မြို့တွင် သိန်းငှက်စစ်ဆင်ရေးစီမံ ချက်ဖြင့် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ စတင်၍ လုံခြုံရေးအင်အား တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှသိရသည်။
”ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်လာတာ က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ တကယ်တမ်းက ညပိုင်းမြို့ပေါ်မှာပတ်သွားကြည်တဲ့ အခါ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လောက် အောင်ထိ တကယ်တမ်းကျမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မြို့ ပေါ်မှာဖြစ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က လှည့်ကင်းတွေ ပိတ်ဆို့တာတွေ ရပ် ကင်းတွေရှိတယ်။ နယ်မြေနဲ့ ခရိုင် ပူးပေါင်းပြီး လုံခြုံရေးအင်အား ၁ဝဝ ကျော်နဲ့ လှည့်လည်ပေးနေ တာတွေရှိတယ်။ မနေ့ကစပြီး ရဲ တပ်ရင်းကအင်အား ၆၅ဦး အင်အားထပ်ဖြည့်ပြီး လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု မန္တလေးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူးကြီးမျိုးအောင်က ပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲ တပ်ဖွဲ့သည် နယ်မြေအတွင်း ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ နှိုက် လျော့နည်းပပျောက် ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီး နှိမ်နင်းရေး၊ အမှုကြီးများ မဖြစ်ပွား စေရေး၊ ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စား သော မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ ဖော်ထုတ် နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကြပ် မတ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထု ထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမည့် လူ အုပ်စုဖြင့် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ကျူးလွန်သော မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ မဖြစ်ပွားစေရေး၊ မှုခင်းကျဆင်းရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အတွက် သိန်းငှက်စစ်ဆင်ရေး စီမံချက်ဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ စီမံချက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပြင် မြို့နယ်အလိုက် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ် မှူးများစသည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ ဖြင့် အင်အားတိုးချဲ့ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ် တွင် လုံခြုံရေးလှုပ်ရှားရဲကင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ ပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ် ငန်းစနစ်အား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားရဲ ကင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ လူစည်ကား သည့်နေရာများတွင် ရပ်ကင်းများ ချထားဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မန္တလေးခရိုင်အတွင်း ဒုစရိုက် ကျဆင်းရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအထူးစီမံချက် ဖြင့် သိန်းငှက်စီမံချက်ကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်မှစတင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ်တွင် လှုပ်ရှားမှုရဲကင်း ၃ဝ ဝန်းကျင်ဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်နှင့် အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးများကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ ပြ??
မန္တလေးတွင် အိမ်ခြံမြေ အငှားဈေးကွက် လှုပ်ရှားလာသော်လည်း ဈေးချိုသည့် မြေကွက်များသာ အရောင်း
ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်တော့မည့် ထရီဇာမေ နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဝန်ြ??